Xukuumada oo shaacisay in sharciga lala tiigsan doono ganacsadihii ku sifooba sicir-barar | Araweelo News Network (Archive) -
Xukuumada oo shaacisay in sharciga lala tiigsan doono ganacsadihii ku sifooba sicir-barar
“Mushkiladu waa ganacsatadeenii oo cuqdad ku dhacday.. Ganacsatada dhexena…”
Hargeysa(ANN)-Xukuumada Somaliland ayaa markii ugu horeysay shaacisay inay talaabo ka qaadi doonaan ganacsadihii lagu arko inuu cidhiidhi gelinayo nolosha shacabka Somaliland.
Agaasimaha waaxda Ganacsiga ee wasaarada Ganacsiga iyo Dalxiiska Aadan Cilmi Axmed ayaa sheegay in xukuumadu soo dhoweynayso ganacsatada, laakiin la marin doono sharciga sida Qodobka 14aad ee dastuurku dhigayo ganacsadihii ku sifooba sicir barar.
Agaasimaha oo wareysi khaas ah oo uu kaga hadlayey mushkiladaha sicir-bararka iyo qorshayaasha ay ku joojinaan ku siiyey xafiiskiisa wargeyska Ogaal iyo Shabakada Araweelonews, waxuu sheegay in xukuumad ahaan ay wadaan daraasad balaadhan oo lagu dersayo sababaha keenay dhowaana xalkeeda gaadhi doonaan.
Agaasimaha oo ugu horeyn ka jawaabayey sababaha keenay sicir bararka ayaa sheegay in saddex xaaladood oo mid baahideena ah mid gudaha iyo mid dibedda ah ay keeneen, “Haddii aynu wax lasoo bixi lahayn kama aynu cabaneen sixir barar iyo waxbaa kordhay, waad ogtihiin qalalaasaha aduunka ka taagan, duufaanada iyo baahi kordhaysa iyo budhcad-badeedo. Dhowaan waxaanu samaynay daraasad wasaarad ahaan, waxaanu ogaanay in dalal baddan oo wax soo saar lahaa oo ganacsigeenu ku xidhnaa iyagii u baahday wixii ay debeda u iibgeyn lahaayeen.”
“Wadankeenu wuxuu noqday halkii aynu lacagteena ka ilaalin lahayn inaynu ilaalino lacagta dollarka, dhaqaallaha dalkuna wuxuu ku xidhan yahay lacagta debeda laga soo diro, tusaale ahaan qifkii loosoo dirayay $ 100 waxa ka go’ay $ 20 dollar oo ka maqan. Dadka qaar ayaa ku dooda dollarka oo maanta maraya $ 1, sarifka lacagta Somaliland 5000 Sh, ha lagu celiyo 6000 s/lnd sh. Sidii uu markii hore ahaa. Laakiin haddii halkisii lagu celiyo waxa imanaya mushkilad kale oo ganacsatadu way kordhinayaan maceeshada, taasina macquul maaha ayuu yidhi.”
“Mushkilada inagu dhacday waxa weeye ganacsatadeenii cuqdad ayaa ku dhacday, shakiga galay waxa weeye, dolarku hadduu kaco shaki ayaa ku jira, dhinaca kalena shakigaa ayaa kaga jira. Markaa labadii dhinacba wuxuu ka samaynayaa ka hor deg, isagoo ka cabsi qaba inay lacagta Somaliland awoodeeda ama qiimeheedu lumo, tusaale ahaan hada lacagta shilinka Somaliland qiime iyo awood ayuu yeeshay, dhinicii kalena wuxuu ka baqayaa dolarkii.”
Agaasimaha oo la weydiiyey in arrintan loo baahnaa inay wax ka qabtaan, markaa miyaanay muuqan inaad ka gaabiseen inaad ganacsatada u sheegtaan xaqiiqda ilaa arrintu way taagantahaye, waxuu ku jawaabay, “Dhuxushii , Caanihii iyo waxyaabihii kale waxba iskama bedelin, markaa wax meel kale inagaga yimi maaha sixir bararku ee waa mushkilad aynu inagu abuuranayno. Wasaaradd ahaan Ganacsatada waxaan leenahay haddii dadku bakhtiyo baayacmushtar ma jirayo, Laakiin waxaan is leenahay qaybta ganacsatada dhexe waxbaa ka khaldan waxaanu samaynay daraasad kuwa waxsoo dejiya markaanu araganay, waxa noo muuqatay in farqa ay iyagu wax saaraan mid macquul ah yahay. Laakiin qolada dhexe inay badeecaduhu ugu qiimaysan yihiin qiimihii hore ee dolarka $ 6,500, markaa waxaanu leenahay waar ganacsatada dhexe cashuurta aad bixisaana dadka ayay saarantahay ee cashuurta bixiya oo markay wax inoo kordhaan dadkana haw kordhaan ee maaha inaad dadka culayska saartaan.”
Agaasimaha oo la weydiiyey ma laga yaabaa inay ganacsatadeenu khalad ka fahantahay ganacsiga xorta ah oo nin walba wuxuu doono wax ku iibiyo oo ay meesha ka maqan tahay in la kaantaroolo si aan dhaqaallaha wadanku fowdo u gelin aya sheegay, “Xukuumaddu hada waxay gacanta ku haysaa talooyin baddan oo daraasad lagu wadaa oo la doonayo in arrintaa wax lagaga qabto, gudiyo ayaa la abuuray oo waxay u baahantahay in talo qaran laga yeesho. Wasaaradda ganacsiguna gudidaa ayay qayb ka tahay, oo ay kula jiraan Rugta ganacsiga, ganacsatada, wasaaradda Maaliyada. Qofkii ganacsato ah ee lagu ogaado inuu cidhiidhi gelinayo nolosha shacabka oo sicir barar samaynayo waxa lala tiigsan doonaa sharciga sida qodobka 14aad ee dastuurka dalku sheegayo.”